Fety sy fialantsasatra amin'ny volana Oktobra
Oktobra in USA
Ireo fetibe sy zava-nitranga ambony tamin'ny Oktobra tany Etazonia
Ny volana oktobra dia mahatsikaiky ny tapany amin'ny fotoanan'ny fahavaratra mahafinaritra, ary volana maoderina handehanana. Mijanona mihoatra ny 50 degre ny mari-pana erak'izao tontolo izao, ary mbola malaky be ny rotsak'orana amin'ny ririnina. Misy ihany koa karazana hetsika maro isan-karazany mandritra ny volana, miaraka amin'ny hetsika sy fankalazana izay azon'ny mpizaheta rehetra mankafy. Mba hanampiana anao hanomboka amin'ny drafitry ny fitsidihanao amin'ny volana Oktobra, ireto no fety sy zava-mitranga mitranga isaky ny Oktobra ao Etazonia.
Ho an'ny vaovao momba ireo fampisehoana vonjimaika, fampisehoana na zavatra hafa indraindray, tsidiho ny USA Travel Blog.
Tamin'ny 15 Oktobra - Lova Espaniola Iraisam-pirenena. Ny fotoana eo anelanelan'ny 15 sy 15 Septambra dia voatendry ho US Heritage Month Month. Ny sekoly, ny tranombakoka, ary ny toeran-kafa dia mampiasa ny fotoana hampianarana ny hafa amin'ny kolotsaina Hispaniola any Etazonia ary ny fandraisan'andraikitry ny Amerikana-Amerikana. Any amin'ny faritra avaratra-atsinanana, ireo tranombakoka Smithsonian any Washington DC dia manomana hetsika toy ny famakiana, fijerena manokana ny zavakanto Hispanika, ary fampisehoana mozika mandritra ny volana maro amin'ny fankatoavana ny tantara sy ny kolontsa Espaniola. Jereo ny andron'ny fianakaviany amin'ny 15 Oktobra ho fankalazana ny fomban-tsarimihetsika mozika ankafizin'ny lovan-tsaranga Hispanika izay mety hankafizin'ny ankizy kely sy lehibe. Any amin'ny Tandrefana, Los Angeles rehetra dia mivoaka mandritra ny volana, miaraka amin'ny fihetsiketsehana mandihy, ny fanarenana ara-tantara, ary ny famokarana sôkôla.
Jereo koa ny Septambra any Etazonia .
Alatsinainy faharoa tamin'ny Oktobra - Andro Columbus . Amin'ny Andro Columbus, hankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'ilay Christopher Columbus, mpikaroka Italiana tany Amerika, ny Amerikana. (Nankalazaina tamin'ny 12 Oktobra ny fankalazana ny Columbus Day.) Fialan-tsasatra federaly ny Andron'i Columbus, izay midika fa mihidy ny biraon'ny governemanta sy ny tsenam-bola.
Saingy tsy ankalazaina manerana an'i Etazonia izany. Ny fankalazan'ny Columbus Day dia malaza indrindra any avaratra atsinanana , indrindra any New York sy New England. Ny Parade Day Parade isan-taona any New York dia midina amin'ny Fifth Avenue ary matetika dia fankalazana ny lova Italiana-Amerikana miaraka amin'ny dihy nentim-paharazana sy ny mozika. Ny parade dia manomboka amin'ny mitataovovonana ary mihazakazaka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Na dia tsy tafahoatra aza izy ireo toy ny Thanksgiving Parade, tsara ny tonga aloha vao tonga saina tsara amin'ny flots sy ny mozika.
Ho an'ireo Amerikanina miaraka amin'ny fakàna vazimba teratany Amerikana, nanjary somary nanohintohina ny fankalazana ny Andro Columbus tato ho ato. Ireo Indizena-Amerikanina dia misafidy ny hanilika ilay paradisa ary hankalaza ny andro fankalazana ny Indigenous Peoples Day tao amin'ny Nosy Randall's New York. Ny fetibe dia manomboka amin'ny 7 ora maraina miaraka amin'ny lanonana fihodinana amin'ny masoandro ary mitohy amin'ny andro mozika, mpandahateny ary fampisehoana miteny.
31 Oktobra - Halloween. Halloween dia tsy fialan-tsasatra federaly, fa iray amin'ireo fialantsasatra malaza indrindra amin'ny firenena. Amin'ity andro ity, ny tanora sy ny antitra dia manao akanjo maotina, ny ankizy dia mandeha mamitaka na mampihetsi -po, ary ny tantara mampatahotra dia ny rigeur . Ireo antokom-pihetseham-po sy lozisialy Halloween dia azo jerena manerana ny firenena.
Raha mitady fomba iray mihoatra ny loha ianao handany ny Halloween, dia alefaso any New Orleans ; noheverina ho tanànan'ny tanàna mihetsi-boloky Amerikana izany ary mampiseho fahatsapana ho an'ny fialantsasatra. Ny fandaharam-potoana isaky ny Krish of Boo Halloween parade dia hatao amin'ny 22 ary ny mason-tsivana sy ny filalaovana hafahafa izay mamakivaky ny tanànan'i Frantsa manan-tantara ao an-tanàna dia fahitana. Ireo mpilalao mavomavo dia afaka milaza hoe "manipika zavatra iray monopole" ho an'ny iray amin'ireo mpandray anjara paradisa, ary hahazo fahatsiarovana miavaka any New Orleans. Ny kostim-pianakaviana dia takiana ao amin'ny "Monster Mash" aorian'ny fizaran-taona, fa aza manahy raha toa ianao ka nanao ilay dia tsy misy, ny tanàna dia feno trano fivarotana fivarotana feno ny saron-tava sy ny fivoahana rehetra. Jereo ny Halloween ao amin'ny torolalana Amerikana mba hizarana hevitra momba ny toerana handehanana sy ny tokony hatao amin'ity fialamboly mahafinaritra ity.
Tsy maintsy mijery any any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Etazonia
Fialan-tsasatra any New England Gay Weekend - fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Boston
Fivarotana 20 RV sy Toeram-ponenana Dark Sky ho an'ny Stargazing
Ny toerana tsara indrindra any Etazonia
Fialantsasatra sy hetsika martsa any Etazonia
10 karazana fanandramana izay tsy tianao hijerena ny safidinao manaraka
Seattle-Tacoma Valentine's Day 2017 Events
Dia lavitra? Toy izao ny fomba fanaovana akanjo lava kokoa sy mora kokoa
Honeymoon Romantique ao Barbados
Hanomboka amin'ny fitetezana an-dàlambe
Fikirakirana Cliff Path
Kauai Marriott Resort sy Beach Club
8 Toerana Tsara Hijerena Live Music ao NYC
Top Brewpubs ao Portland Oregon
Nasehon'ny National Fiery Foods
Anarana anarana malaza ao Miami History
Bandar Seri Begawan - Renivohitry Brunei
Fetin'ny reny tsara indrindra